felinoterapii များ၏ကုသမှုကို Power ။ ကြောင်တစ်ကောင်အဖြစ်ကလူပြုမူဆက်ဆံ
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနျြးမာရေးအတှကျ Felinoterapiya အကျိုးအမြတ် purr ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများစိတ်ကျန်းမာရေးကြောင် - မရမယ့်တစ်ဦးကြည်နူးဖွယ်တိရိစ္ဆာန်များ, သူတို့ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုပေး။ ရှေးခေတ်တွင်တွေ့မြင်လူတွေကိုအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကို
ခွေးအတွက်သိမှုကမောက်ကမဖြစ်မှု syndrome ရောဂါ: လက္ခဏာတွေနှင့်ကုသမှု
လူသားများတွင်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါပုံနဲ့တူတဲ့ဟာသရုပ်နှင့်ဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲများအပေါ်တစ်ဦးရောဂါဗေဒအဖြစ်နေရာယူထားသည်ကိုမည်သို့သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ syndrome ရောဂါရှာဖွေရေးမှာများနှင့်ဆက်ဆံဖို့ပိုင်ရှင်ကိုသတိပေးသင့်တယ်ဘယ်အရာကိုအပြောင်းအလဲမြန်အပြုအမူ၏ပထမဦးဆုံးအရိပ်လက္ခဏာ။
ယူ သာ. ကောင်း၏ဘယ်အရာကိုအသက်အရွယ်မှာပြပေးရှိသည်လုပ်နည်း။ ကပြပေးအလွန်ဆိုးသောအနံ့ဖြစ်ကြောင်းဟုတ်မှန်ပါသလား?
တိရိစ္ဆာန်များ၏ဘယျသို့သော - တစ်ပြပေးဗျည်းအက္ခရာ contents တွေကိုမှတ်စုများအမြီး၏အစွန်အဖျားပေါ်မှာတစ်ချိန်က henhouses မိုးကြိုးမုန်တိုင်း - ယနေ့လူကြိုက်အများဆုံးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတဦး။ တစ်ဇိမ်ခံသားမွေးကုတ်အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်နှင့်ဆိုးဆိုးရွားရွားလိမ္မာပါးနပ်, Grace - ပြပေးပင်ပထမဦးဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာမတိုင်မီ captivates နှင့်
သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်အကြိုက်ဆုံးနိုင်စေဖို့အချို့သောအသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ဖို့တာဝနျရှိဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လို CPR တစ်ခုချင်းစီကိုတာဝန်ယူပိုင်ရှင်လုပ်ဆောင်သွားရန်ဆို့ပါလျှင်ဘာကားဖြင့်ဝင်တိုက်လျှင်အနာနှင့်ဒဏ်ရာလုပ်ဆောင်ချက်ကုသမှုဘာလုပ်ဖို့ပိတ်ထား
pooch ကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းနှင့်စမတ် pedigree အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖြစ်ပါသလား purebreds နှင့် mutts များ၏ content အတွက်ကွာခြားချက်ရှိပါသလား
ဒါဟာပိုပြီးခက်ခဲ pedigree အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆံ့ဖို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သင် purebred ဝတ်ရည်ပိုပြီးပျက်စီးလွယ်တစ်ဦး pedigree ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတဲ့သူကိုသူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းထက်ဖြစ်ကြောင်းမကြာခဏစကားကိုနားထောငျနိုငျသညျ, ရေးဆွဲနိုင်ပါသည်ဘယ်အရာကိုကောက်ချက်ကျန်းမာကြီးထွားပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်နည်း။ အတော်များများကပိုင်ရှင်တွေထိုကဲ့သို့သောကြောင်းတိုင်ကြား